MIMO-Pedia - MimoWork
NY ASA ANAO
Akanjo & Lamba an-trano
Dokam-barotra & Fanomezana
Ny Laser Solutions
Rafitra mifanandrify modely
Momba ny MimoWork
Fikojakojana & Fikarakarana
Toerana fivorian'ireo tia laser
Toeram-pahalalana ho an'ny mpampiasa ny rafitra laser
Na olona efa nampiasa fitaovana tamin'ny laser nandritra ny taona maro ianao, na te hampiasa fitaovana laser vaovao, na liana amin'ny laser fotsiny, dia eto foana i Mimo-Pedia hizara ny fampahalalana laser sarobidy rehetra maimaim-poana hanampy anao. manatsara ny fahatakarana ny laser ary mamaha ny olan'ny famokarana azo ampiharina.
Ireo mpankafy rehetra izay manana hevitra momba ny laser dia raisina an-tanan-droa mba hifandray aminay haneho hevitra sy soso-kevitra.
Ny laser dia heverina ho teknolojia fanodinana nomerika sy tontolo iainana vaovao ho an'ny famokarana sy ny fiainana ho avy.Miaraka amin'ny vina manokan-tena amin'ny fanamorana ny fanavaozana ny famokarana sy ny fanatsarana ny fomba fiainana sy ny asa ho an'ny rehetra, ny MimoWork dia nanaparitaka sy nalaza tamin'ny laser vaovao.Manana traikefa manankarena sy fahaiza-manao teknika laser matihanina, mino izahay fa tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fahalalana laser teorika sy azo ampiharina.
>> Fantaro bebe kokoa momba anay
Mikasa ny hampiditra fahalalana tamin'ny laser amin'ny fiainana mahazatra sy hanosika bebe kokoa ny teknolojia tamin'ny laser ho fampiharana, ny tsanganana dia manomboka amin'ny laser mafana olana sy ny fisafotofotoana, rafitra manazava tamin'ny laser fitsipika, tamin'ny laser fampiharana, tamin'ny laser fampandrosoana, ary ny olana hafa.
Tsy dia be loatra ny mahafantatra ny fahalalana tamin'ny laser anisan'izany ny teoria tamin'ny laser sy ny fampiharana tamin'ny laser ho an'ireo izay te hijery ny fanodinana laser.Ho an'ireo olona nividy sy nampiasa fitaovana tamin'ny laser, ny tsanganana dia hanome anao fanohanana ara-teknolojia laser amin'ny famokarana azo ampiharina.
Miaraka amin'ny traikefan'ny fitarihana an-tserasera sy an-tserasera ho an'ny mpanjifa maneran-tany, dia mitondra toro-hevitra sy fika azo ampiharina sy mety ianao raha sendra ny toe-javatra toy ny fiasan'ny rindrambaiko, ny tsy fahombiazan'ny circuit elektrika, ny famahana olana mekanika sy ny sisa.
Ataovy azo antoka ny tontolo iasana azo antoka sy ny fizotry ny fiasana mba hahazoana vokatra sy tombony ambony indrindra.
Ny fitiliana ara-materialy dia tetikasa mitohy mandroso.Ny vokatra haingana kokoa sy ny kalitao tsara dia nahakasika ny mpanjifa foana, toy izany koa izahay.
MimoWork dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanodinana tamin'ny laser ho an'ny fitaovana isan-karazany ary mitohy amin'ny fikarohana fitaovana vaovao mba hahazoana ny vahaolana laser mahafa-po indrindra ny mpanjifa.Ny lamba lamba, ny fitaovana indostrialy, eny fa na ny fitaovana ara-tsaina aza dia azo tsapain-tanana amin'ny fitarihana sy soso-kevitra mety sy marina amin'ny mpanjifa amin'ny sehatra samihafa.
Mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa momba ny laser dia azonao atao ny mijery ny horonan-tsarimihetsika ho an'ny fampisehoana dynmic kokoa momba ny fampisehoana laser amin'ny karazana fitaovana samihafa.
Izahay no mpiara-miasa amin'ny laser manokana anao!
Mifandraisa aminay raha misy fanontaniana, fifampidinihana na fifampizaràna vaovao
Mpamatsy Laser azo itokisana anao
No.840 Chengliu Hwy, Distrika Jiading, Shanghai, Sina
©Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. , , , , , , ,